Ihe Dị ọkụ Na Ekpo ọkụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ihe Dị ọkụ Na Ekpo ọkụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ihe Dị ọkụ Na Ekpo ọkụ)
Alakụkụ ala ala Amazon dị ala
Nkọwapụta ngwaahịa Alakụkụ ala ala Amazon na-agba chaa chaa na- adịghị mma, amphibious. Enwere ike ịgbachi agba, dị mfe ihichapụ ebe dị ọcha. Debe ụdọ ike, gbochie anụ ma ọ bụ dọta ya. Ọ bụ ihe kacha mma anụ ọkụ kpo oku mkpuchi ngwaahịa. Ojiji zuru oke: enwere ike iji ya kpoo anụ ahụ, kpoo na nkịta dị ọkụ, mmiri ọkụ...
Ihe Dị ọkụ Na Ekpo ọkụ Ihe dị ọkụ na-ekpo ọkụ Ike Ọkụ Na-ekpo ọkụ Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ Ọkụ Na-ekpo ọkụ Uwe Okpomọkụ Na-ekpo ọkụ Igwe ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ Mittens ọkụ na-ekpo ọkụ